WhatsApp dia hampiditra stiker animated amin'ity taona ity | Androidsis
Ny WhatsApp dia miasa amin'ny fampidirana sticker matevina
Nanjary zava-dehibe amin'ny WhatsApp ny sticker. Ny fampiharana fandefasan-kafatra dia mamela antsika hampiasa azy ireo, ankoatry ny fisintomana azy ireo ao amin'ny app. Azonao atao ihany koa ny mamorona sticker anao manokana, ho an'ireo mpampiasa liana amin'io lafiny io. Ankehitriny, mandeha lavitra kokoa ilay fampiharana miaraka amin'ny zava-baovao izay ho avy tsy ho ela.
Satria azo atao ny mahalala fa miasa ilay rindranasa ampidiro vetivety ny sticker sticker. Izany dia zavatra kasain'ny WhatsApp ampidirina, na dia tsy zavatra mavitrika amin'ny fampiharana aza izy amin'izao fotoana izao. Saingy ho avy amin'ity taona ity, antenaina.
Tsy vao sambany no misy ny resaka momba an'io. Hatramin'ny fotoana vitsy lasa izay, ny fampiharana dia nanome ny fahatsapana ny fampidirana ireo sticker ireo, na dia fanairana diso aza izany. Nefa izao dia toa matotra izy ireo. Raha ny tena izy, Ao amin'ny kaody loharanom-WhatsApp dia efa miseho ireo sticker sticker.
Ny maha samy hafa ny sticker sticker sy ny GIF dia tsy toy ny farany, hiatrika lalao miverimberina ao anaty chat izy ireo. Ka tsy hijanona izy ireo rehefa tsindrio azy ireo, toy ny amin'ny GIF. Ho fanampin'izay, ho afaka ampidirina anaty fonosana izy ireo, toy ny sisa amin'ireo sticker amin'ny app.
Andrasana noho izany samy manana ny fidirana na ny Android na ny iOS an'ny WhatsApp amin'ireto sticker ireto. Ary ny kinova amin'ny fampiharana ho an'ny takelaka dia tokony hanana izany. Na dia amin'izao fotoana izao aza dia tsy manana daty amin'ny fampidirana azy isika. Fantatsika ihany fa mitsapa azy ireo izy ireo ankehitriny.
Noho izany, mety maharitra volana vitsivitsy vao ho ofisialy. Fa hitandrina tsara ny vaovao momba ireo sticker sticker mihetsika ao amin'ny WhatsApp ireo izahay. Jereo ihany koa ny fanekena izay hananan'ireo mpampiasa azy ireo, izay tsy isalasalana fa lafiny iray hafa manan-danja. Ahoana ny hevitrao momba azy ireo?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ny WhatsApp dia miasa amin'ny fampidirana sticker matevina
Ny Galaxy S10 sy S10 + dia mamoaka ny Galaxy S10e
Avelan'i Alemanina hametraka fotodrafitrasa 5G ao amin'ny firenena i Huawei